बिचार / ब्लग Archives -
Category: बिचार / ब्लग
भदौ २८, २०७८ भदौ २८, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on कृषि विकासको वास्तविक समस्या के हो ?
यस पटकको कोभिड-१९ कोरोना भाईरस गत बर्ष भन्दा अझ भयावह बन्दै गएको छ । अस्पतालहरुले अक्सिजन ग्यास नभएकाले थप विरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर सूचना टाँस गर्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा संक्रमित छन् तर पिसिआर जाँच गराएका छैनन् , किन भने अस्पतालमा ठाउँ छैन । कालिमाटी कृषि बजार जो देशकै ठूलो कृषि बजार मानिन्छ बन्द […]
Moving from small-scale to commercial farming
भदौ ११, २०७८ भदौ ११, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on Moving from small-scale to commercial farming
Sher Bahadur Sahi (Suraj) isa35 year-old commercial farmer from Satyawati Rural Municipality in Gulmi District. He previously farmed onasmall scale but started commercial-scale farming when Paicho establishedanew collection center in Satyawati which he says encouraged him because of their assurance to buy vegetables directly from farmers. To date, he […]
राजेश विद्रोही सानोमा प्रशस्तै सुनिन्थ्यो- नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, अचेल त्यो सुनिन छोडिएको छ । यतिसम्म कि हाम्रो पाठ्यक्रममा कृषि शिक्षा छुट्टै कोर्स पढ्नुपर्थ्यो । बालीनालीको बारेमा धेरै ज्ञान आर्जन हुन्थ्यो । कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने सिकाइ हुन्थ्यो । आमाबुवाले एकाबिहानै उठाएर खेतबारीमा काम गर्न लगाउनुहुन्थ्यो । समयमै स्कूल जानुपर्थ्यो । अहिले यी […]
साउन ७, २०७८ साउन ७, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on Zero Budget Natural Farming
Zero Budget Natural Farming: Approach towards Sustainable Agriculture Agriculture is one of the essential requirements to produce food. Assuming we takeagander at the whole ecosystem, then agriculture seems to be both cause and victim of water scarcity. The green revolution hadanoteworthy impact on the world’s food production, however, it’s likewise become […]
देबेन्द्र राज पौडेल जानकी : ६३.३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जानकी गाउँपालिका प्रमुख औद्योगिक, ब्यापारिक र कृषि योग्य स्थल सहर बाँके जिल्लामा अवस्थित एक व्यापारिक तथा अद्यौगिक क्षेत्रमा प्रचिलित ठाउँ हो । यसको क्षेत्र सुर्खेतरोडको मनिकापुर एयरपोर्टको सीमानादेखि खजुरा रोड हुँदै साई गाउँ भारतको सीमाना संग जोडेको देखाउँछ । जानकी गाउँपालिकामा ६ वटा वडा रहेका […]
दुई वर्षभित्र हामी दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर -मन्त्री अर्याल
जेष्ठ १८, २०७८ जेष्ठ १८, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on दुई वर्षभित्र हामी दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर -मन्त्री अर्याल
काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अबको दुई वर्षभित्र मुलुक दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेकी छन् । विश्व दुध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताइन् । ‘अबको दुई वर्षभित्र हामी दुधमा आत्मनिर्भर बन्छौँ । प्रति व्यक्ति ११ लिटर दुध अपुगको अहिलेको अवस्थालाई दुई […]
जेष्ठ १७, २०७८ जेष्ठ १७, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on अकबरे खुर्सानी खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
खुर्सानीको राजा मानिने अकबरे खुर्सानी अत्यन्तै पिरो र स्वादिलो हुन्छ । यसको उत्पतिबारे एकिन जानकारी नभएपनि अन्य खुर्सानी जस्तै मध्य अमेरिकाको मेक्सिकोमा भएको अनुमान छ । नेपालमा यसको आगमन कहिले र कसरि भयो भन्ने यकिन तथ्याङक नभएपनि भारतबाट त्यहाँ कामको सिलसलामा गएका नेपालीहरू वा भारतिय तिर्थयात्रीहरूले भित्राएको हुनसक्ने आङकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको पुर्वदेखि सुदुर […]
केराको फुल(बुङ्गा) खानुका फाइदा
जेष्ठ १०, २०७८ जेष्ठ १०, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on केराको फुल(बुङ्गा) खानुका फाइदा
केरा स्वास्थ्यका लागि अति नै फाइदाजनक छ। यसका साथै केराको फुल अर्थात् (बुङ्गा) लाई पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले लाभदायी मान्ने गरिन्छ।केराको बुङ्गाको महत्वको बारेमा धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानहरु भएका छन् । यी अनुसन्धानबाट देख्नमा आकर्षक मात्रै नभएर स्वास्थ्यको लागि समेत केराको बुङ्गा लाभदायक हुने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । केराको बुङ्गालाई केराको बोटको मुटुको मान्ने गरिन्छ । […]
के हो परागसेचन ?
जेष्ठ ९, २०७८ जेष्ठ ९, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on के हो परागसेचन ?
कुनै पनि प्राणीमा वंश विस्तारको आधार भनेकै भाले र पोथीबीच हुने समागम हो । वनस्पति वर्गमा भाले तत्व परागकणबाहेक सबै अंग स्थिर (अचल) हुन्छन् । किरा, हावा, पानी र अन्य जीवको माध्यमबाट चल अवस्थामा रहेका परागकण अचल अवस्थाको स्त्रीकेशरमा छिर्छ र परागसेचन हुने गर्छ । यस्ता परागसेचन गराउने माध्यमलाई परागसेचक भनिन्छ । परागसेचनले नै बाली […]
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयारीमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सक्रिय रुपमा लागि रहेको छ । सोही सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि मस्यौदामा समेटिनु पर्ने सुझाव कर्णली प्रदेश योजना आयोगलाई पेश गरेको छ । प्रस्तुत छ, पेश गरिएको मस्यौदाको पुर्ण पाठ यस्तो […]